Imimmisele yenkonzo - Popular Jewelry
Le webhsayithi iyasebenza Popular Jewelry. Kulo lonke isayithi, imiqathango ethi "thina", "thina" kunye "yethu" ibhekisele kuyo Popular Jewelry. Popular Jewelry unikeza le website, kuquka zonke iinkcukacha, izixhobo kunye neenkonzo ezifumaneka kule ndawo kuwe, umsebenzisi, ulungele ukwamkelwa kwayo yonke imiqathango, imiqathango, imigaqo-nkqubo kunye nezaziso ezichazwe apha.
Ngokutyelela indawo yethu kunye / okanye ukuthenga into kuthi, ujoyina "kwiNkonzo" yethu kwaye uyavuma ukuboshwa yimimiselo neemeko ezilandelayo ("imigangatho yeNkonzo", "imigomo"), kubandakanywa le miqathango nemigaqo kunye nemigaqo Echazwe apha kunye / okanye ekhoyo nge hyperlink. Le Migangatho yeNkonzo isebenza kubo bonke abasebenzisi besayithi, kubandakanywa ngaphandle kwabasebenzisi abaphengululi, abathengisi, abathengi, abathengisi, kunye / okanye abancedisi bomxholo.
Nceda ufunde le Migaqo yeNkonzo ngokucophelela ngaphambi kokufikelela okanye ukusebenzisa iwebsite yethu. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yesayithi, uyavuma ukuba uboshwe yiMigomo yeNkonzo. Ukuba awuvumelani nayo yonke imimiselo nemiqathango yesi sivumelwano, ngoko awukwazi ukufikelela kwiwebhusayithi okanye ukusebenzisa nayiphi na inkonzo. Ukuba le Migangatho yeNkonzo ithathwa njengesingeniso, ukwamkelwa kuya kuphelelwana kule Miqathango yeNkonzo.
Naliphina iimpawu ezintsha okanye izixhobo ezongeziweyo kwivenkile yangoku ziya kugxininiswa neMigomo yeNkonzo. Unokuphonononga inguqu ekhoyo yangoku yeMigqaliselo yeNkonzo nanini na kweli khasi. Sigcina ilungelo lokuhlaziya, ukutshintsha okanye ukubuyisela nayiphi na inxalenye yale Migangatho yeNkonzo ngokuthumela izibuyekezo kunye / okanye utshintsho kwiwebhusayithi yethu. Kuwuxanduva lwakho ukujonga eli phepha ngezihlandlo. Ukusetyenziswa kwakho ngokuqhubekayo okanye ukufikelela kwiwebhusayithi emva kokuthunyelwa kwazo nayiphi na utshintsho kubandakanya ukwamkelwa kwezo zinguqulelo.
ICANDELO 1 - INGXELO YOKWENZA I-ONLINE
Ngokuvumelana nale Migangatho yeNkonzo, umela ukuba ubuncinane ubuninzi benani lalo lizwe okanye kwiphondo yokuhlala, okanye ukuba uneminyaka yobudala kwisimo sakho okanye kwiphondo yokuhlala kwaye usinike imvume yakho Vumele ukuba nabani na abaxhomekeke kuyo ukuba basebenzise le sayithi.
Awukwazi ukusebenzisa iimveliso zethu nangayiphi na into engekho mthethweni okanye engagunyaziswanga okanye ungasebenzisa nayiphi na imithetho kwimigunya yakho (kuquka kodwa ingaphelelanga kwimithetho ye-copyright).
ICANDELO 2 - IMIGAQO EQHELEKILEYO
ICANDELO 3 - UKUGCINA, UKUZIPHATHISWA KUNYE NENGXELO YOLWAZI
ICANDELO 4 - IMISEBENZI YENKONZO NEEMISEBENZI
ICANDELO 5 - IINKCUKACHA NENKONZO (ukuba ikhona)
Senze yonke imizamo yokubonisa ngokuchanekileyo imibala nemifanekiso yemveliso yethu ebonakalayo kwisitoreji. Asinakuqinisekisa ukuba umboniso wakho wekhompyutheni yekhompyutheni yombala uya kuchaneka.
ICANDELO 6 - UKUVUMELWA KWENKCAZO YOKUPHILA NENGCACISO
Ngolunye ulwazi, nceda ubuyekeze inqubomgomo yethu yokubuyisela.
ICANDELO 7 - IZIKHONO ZEMISEBENZI
Kananjalo, nakwixesha elizayo, sinokunikela ngeenkonzo ezintsha kunye / okanye iimpawu kwiziko lewebhu (kuquka, ukukhutshwa kwezixhobo ezintsha kunye nezixhobo). Iimpawu ezintsha kunye / okanye iinkonzo ziya kuhambelana nale Migangatho yeNkonzo.
ICANDELO 8 - IINKCUKACHA ZESITHATHU
Asinakuhlawulwa nayiphi na umonakalo okanye umonakalo onxulumene nokuthengwa okanye ukusetyenziswa kweempahla, iinkonzo, izibonelelo, umxholo, okanye nayiphi na enye intsebenzo eyenziweyo ngokumalunga nanoma iyiphi i-website ye-third party party. Kucelwa uhlalutye ngokucokisekileyo iinkqubo kunye neenkqubo zenkampani yesithathu kwaye qinisekisa ukuba uyaziqonda ngaphambi kokuba uzibandakanye nayiphi na intengiso. Izikhalazo, amabango, ukukhathazeka, okanye imibuzo malunga neemveliso zenkampani yesithathu kufuneka zijoliswe kumntu wesithathu.
ICANDELO 9 - IMITHETHO YAMASEBENZI, INKQUBO NEMINYE IMISEBENZI
Ukuba, kwisicelo sethu, uthumela ezithile iziphakamiso ezithile (umzekelo wokungena kwamashishini) okanye ngaphandle kwesicelo esivela kuthi, uthumela iingcamango zobugcisa, iziphakamiso, iziphakamiso, izicwangciso, okanye ezinye izinto, nokuba ingaxhumela kwi-intanethi, nge-imeyile, ngeposi yeposi, okanye ngenye indlela (Ngokubambisana, 'izimvo'), uyavuma ukuba sinokuthi, nangaliphi na ixesha, singabinqatshelwe, hlengisa, ukukopisha, ukupapasha, ukusabalalisa, ukuguqulela kunye nokusetyenziswa kwezinye iindawo naziphi na izimvo ozozithumela kuzo. Thina kwaye siya kuba phantsi koxanduva (1) ukugcina naziphi izimvo ngokuzithemba; (2) ukuhlawulela imali nayiphi na izimvo; Okanye (3) ukuphendula naziphi na izimvo.
Sinokuthi, kodwa asinakubophezeleka, ukubeka iliso, ukuhlela okanye ukususa umxholo esinqumayo kwisigqibo sethu sodwa asikho mthethweni, sikhusekisa, sisongela, sisinyanisekile, sichasayo, sinobuqhetseba, sihlazo okanye sichasene okanye siphulaphula nayiphi na impahla yepropathi okanye le Migaqo yeNkonzo .
ICANDELO 10 - INGCACISO YOMNTU
Ukungeniswa kolwazi lwakho lomntu kwi-venkile lilawulwa nguMgaqo-nkqubo Wobumfihlo. Ukujonga iMigaqo yethu yobumfihlo.
ICANDELO 11 - I-ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
ICANDELO 12 - UKUSEBENZISWA KWEENKQUBO
Ukongeza kwezinye iinqandiselo njengoko kuchazwe kwiMigomo yeNkonzo, awuvumelekanga ukusebenzisa isayithi okanye umxholo wayo: (a) nayiphi na injongo engekho mthethweni; (B) ukucela abanye ukuba benze okanye bathathe inxaxheba kuzo naziphi na izenzo ezingekho mthethweni; (C) ukwephula nayiphi na imimiselo yomhlaba wonke, yomthetho, wephondo okanye yombuso, imigaqo, imithetho, okanye imimiselo yendawo; (D) ukuphula umthetho okanye ukuphulwa kwamalungelo ethu epropati okanye i-intellectual property rights of others; (E) ukuhlukumeza, ukuxhaphaza, ukuhlambalaza, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyelisa, ukuphazamiseka, ukutshitshisa okanye ukubandlulula ngokubhekiselele kwisini, ukuxhatshazwa ngokwesini, inkolo, ubuhlanga, ubuhlanga, ubudala, imvelaphi yesizwe okanye ukukhubazeka; (F) ukungenisa ulwazi olungamanga okanye olukhohlisayo; (G) ukulayisha okanye ukuhambisa ii-virus okanye nayiphi na enye ikhowudi enobungozi eya kusetyenziswa okanye nayiphi na into eya kuchaphazela ukusebenza okanye ukusebenza kweNkonzo okanye nayiphi na i-website enxulumene nayo, ezinye iiwebhusayithi okanye i-intanethi; (H) ukuqokelela okanye ukulandelela ulwazi lomntu ngabanye; (I) ugaxekile, i-phish, i-pharm, i-pretext, isicabucu, i-crawl, okanye i-scrape; (J) nayiphi na into ehlazo okanye yokuziphatha okubi; Okanye (k) ukuphazamisa okanye ukukhupha iimpawu zokhuseleko zeNkonzo okanye nayiphi na iwebhusayithi ehambelana nayo, ezinye iiwebhusayithi okanye i-intanethi. Sigcina ilungelo lokuphelisa ukusebenzisa kwakho iNkonzo okanye nayiphi na idibanisayithi edibeneyo yokuphula naluphi na ukusetyenziswa okuvumelekileyo.
ICANDELO 13 - INKCAZELO YAMARRANTA; UKUBHALA KWEENKQUBO
Uyavuma ngokuqinisekileyo ukuba ukusetyenziswa kwakho, okanye ukungakwazi ukusebenzisa, inkonzo iyona mngcipheko wodwa. Inkonzo kunye nayo yonke imveliso kunye neenkonzo ezinikwe kuwe ngeenkonzo (ngaphandle kokuba kuchazwe ngokucacileyo kuthi) zibonelelwe 'njengokuba' kwaye 'zikhoyo' ukuba zisetyenziswe, ngaphandle kokumelwa, iimqinisekiso okanye iimeko zaluphi na uhlobo, Echazwe, kubandakanywa zonke iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokuthengiswa, umgangatho othengisayo, ukuqina kwinjongo ethile, ukuzinza, isihloko kunye nokungaphuthi.
Akunjalo na Popular Jewelry, abalawuli bethu, amagosa, abasebenzi, amaqumrhu, abameli, abakontraki, abaqeqeshi, abaxhasi, ababoneleli, abanikezeli-nkonzo okanye abalayisenisi bahlawuliswa naliphi na ukulimala, ukulahleka, ibango, okanye nayiphi na into ngqo, engahambelaniyo, engafanelekanga, isohlwayo, eyimfuneko, okanye umonakalo othe waluphi na uhlobo , kubandakanywa, ngaphandle kokunciphisa inzuzo elahlekileyo, ukulahlekelwa kweengeniso, ukugcina imali, ukulahlekelwa kwedatha, iindleko zokutshintsha, okanye nayiphina imonakalo, enoba isekelwe kwisivumelwano, kubandakanya ukunganakwa), uxanduva oluqinileyo okanye olunye uhlobo, ngenxa yokusebenzisa kwakho nayiphi na inkonzo okanye nayiphi na imikhiqizo ethengiweyo isebenzisa isevisi, okanye nayiphi na enye ibango ephathelene nayo nayiphi na indlela ekusebenziseni kwakho inkonzo okanye nayiphina imveliso, kubandakanywa, kodwa ingaphelelwanga kuyo, naziphi na iimpazamo okanye ukushiya kuyo nayiphi na into, okanye nayiphina ilahleko okanye umonakalo ububele obubanjelwe ngenxa yokusetyenziswa kwenkonzo okanye nayiphi na into (okanye imveliso) ithunyelwe, idluliselwa, okanye yenziwe enye ngeenkonzo, nokuba ikwacetyiswa ukuba kungenzeka. Kungenxa yokuba abanye bathi okanye iimbambano azivumeli ukukhutshwa okanye ukukhawulelwa kweemfanelo ezilungeleyo okanye ezibangelwa yimimiselo, kwiimeko ezinjalo okanye kumagunya, uxanduva lwethu luya kufikelela kumlinganiselo ophezulu ovunyelwe ngumthetho.
ICANDELO 14 - INDEMNIFICATION
Uyavuma ukuhlawulela, ukukhusela nokugcina ingozi Popular Jewelry kunye nabazali bethu, amaqabane, amaqabane, amagosa, amagosa, abalawuli, abathinteli, abakontraki, abaxhasi, abanikezeli ngeenkonzo, abathwali-nkonzo, abaxhasi, abaxhasi kunye nabasebenzi, abanokungabikho naliphi na ibango okanye imfuno, kubandakanywa neentlawulo zommeli, ngenxa yokuphuma okanye ukuphulwa kwakho kwale Migangatho yeNkonzo okanye amaxwebhu abandakanyekayo ngokubhekiselele, okanye ukuphula kwakho nayiphi na umthetho okanye amalungelo omntu wesithathu.
ICANDELO 15 - UKUPHUMA
Kwimeko apho kukho nawuphi na umqathango weMigqaliselo yeNkonzo igqitywe ukuba ayikho mthethweni, ayikho okanye ayinakuqiniswa, loo mqathango uya kunyanzeliswa ngokupheleleyo ngokuvunyelwa ngumthetho osebenzayo, kwaye inxalenye engenakuqiniswayo iya kuthatyathwa ukuba ikhutshwe kule Migaqo Inkonzo, ukuzimisela okunjalo akuyi kuchaphazela ukuqinisekiswa nokunyanzeliswa kwanoma yintoni enye imigaqo eseleyo.
ICANDELO 16 - ISIXHELO
Le Migangatho yeNkonzo isebenza ngaphandle kokuba kwaye ize ipheliswe nguwe okanye kuthi. Unokuphelisa le Miqathango yeNkonzo ngasiphi na ixesha ngokusixelela ukuba awunasifuni ukusebenzisa iiNkonzo zethu, okanye xa ushiya ukusebenzisa indawo yethu.
Ukuba kwisigwebo sethu sodwa siphumelelanga, okanye sikhankanya ukuba awuphumelelanga, ukuthobela nayiphi na ixesha okanye ukubonelelwa kwezi Migangatho yeNkonzo, nathi sinokuphelisa esi sivumelwano nanini na ngaphandle kwesaziso kwaye uya kuhlala ubopheleleka kuwo onke amaxabiso afunekayo Kwaye kuquka umhla wokuphela; Kunye / okanye ngokufanelekileyo unokukukhanyela ukuba ufinyelele kwiNkonzo zethu (okanye nayiphi na inxalenye yayo).
ICANDELO 17 - IMVUMELWANO YONYAKA
Ukungaphumeleli kokusebenzisa okanye ukunyanzelisa nayiphi na ilungelo okanye ilungiselelo leMigomo yeNkonzo ayiyi kuba yintlawulo yelo lungelo okanye ilungiselelo.
Le Migangatho yeNkonzo kunye nayo nayiphi na imigaqo-nkqubo okanye imithetho yokusebenza ethunyelwe nguwe kule ndawo okanye ngokubhekiselele kwiNkonzo yenze isivumelwano sonke kunye nokuqonda phakathi kwakho kunye nokulawula ukusetyenziswa kwakho kweNkonzo, ubeka phambili naziphi na izivumelwano eziphambi kwexesha okanye eziqhelekileyo, unxibelelwano kunye neziphakamiso. , Nokuba ngumlomo okanye ubhaliwe, phakathi kwakho kunye nathi (kubandakanywa, kodwa kungaphelelwanga, naziphi na iinguqulelo zangaphambili zeMigangatho yeNkonzo).
Naluphi na ukungahambi kakuhle ekuchazeni le Migangatho yeNkonzo ayiyi kuthethwa malunga nequmrhu lokuqulunqa.
ICANDELO 18 - UMTHETHO OLAWULO
Le Migaqo yeNkonzo kunye nazo naziphi na izivumelwano ezizimeleyo apho sikubonelela khona ngeenkonzo ziya kulawulwa kwaye zithatyathwe ngokwemithetho ye-255 Canal Street New York New York yase-US 10013.
ICANDELO 19 - UTSHINTSHA KWEENKONZO ZENKONZO
Unokuphonononga inguqu ekhoyo yangoku yeMigqaliselo yeNkonzo nanini na kweli khasi.
Siyalondoloza ilungelo, kwengqiqo yethu kuphela, ukuhlaziya, ukutshintsha okanye ukubuyisela nayiphi na inxenye yale Migangatho yeNkonzo ngokuthumela izibuyekezo kunye noshintsho kwiwebsite yethu. Kuxanduva lwakho ukujonga i-website yethu ngezikhathi ezithile ukuze utshintshe. Ukusetyenziswa kwakho ngokuqhubekayo okanye ukufikelela kwiwebhusayithi yethu okanye iNkonzo emva kokuthunyelwa kwanoma yiziphi iinguqulelo kule Migaqo yeNkonzo yinto yokwamkelwa kwezo zinguqulelo.
ICANDELO 20 - IINKCUKACHA ZEZINKCUKACHA
Imibuzo malunga neMigaqo yeNkonzo kufuneka ithunyelwe kuthi info@popular.jew jewelry